माओवादीको बैठकमा नारायणकाजीको आक्रोश : बन्दुक नबोकेको स्पष्टीकरण कहिलेसम्म? – Himalaya TV
Home » समाचार » माओवादीको बैठकमा नारायणकाजीको आक्रोश : बन्दुक नबोकेको स्पष्टीकरण कहिलेसम्म?
माओवादीको बैठकमा नारायणकाजीको आक्रोश : बन्दुक नबोकेको स्पष्टीकरण कहिलेसम्म?
७ श्रावण २०७४, शनिबार ०७:०४
काठमाण्डौ, ७ साउन । माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले आफूले ‘जनयुद्ध’ नलडेको विषय पार्टीभित्र कहिलेसम्म प्रस्टीकरण दिनुपर्ने भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
पार्टीभित्र बन्दुक बोकेका र नबोकेका भनी पटक-पटक घोचपेच चलेकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेता श्रेठले आफूले बन्दुक नबोकेको विषय पार्टीभित्र कहिलेसम्म जवाफ दिइरहनुपर्ने जानकारी दिन आग्रह गरेका छन्। माओवादी सचिवालयको जारी बैठकमा शुक्रबार धारणा व्यक्त गर्ने क्रममा वरिष्ठ नेता श्रेष्ठले कि पार्टी एकता ठीक छैन भन्नुपर्‍यो होइन भने बन्दुक बोकेको र नबोकेको भनी दुई जातिको नेता-कार्यकर्ताको व्यवहार देखाउन नहुने बताए।
शान्तिप्रक्रियामा आएपछि एकताका नाममा बन्दुक नबोक्नेलाई पार्टीमा सहभागी गराउँदा लथालिंग हुन पुगेको टिप्पणी केही नेताले गरेपछि श्रेष्ठको आक्रोश सार्वजनिक भएको हो । ‘पार्टीभित्र दुईथरी नेता-कार्यकर्ता छौं, एउटा ‘जनयुद्ध’ थरी, अर्का जनआन्दोलन थरी ।
म दोस्रो थरी परें’, श्रेष्ठको भनाइ उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी एक नेताले अन्नपूर्णलाई जानकारी दिए, ‘जनयुद्ध लडेर आउनेलाई सम्मान छ तर म अर्का थरीले कहिलेसम्म आफू नथरी भएको भनी प्रस्टीकरण दिइरहनुपर्ने हो?’ बदलिएको राजनीतिक परिवेशअनुसार पार्टी निर्माणका लागि व्यापक मात्रामा नयाँ पुस्तालाई पार्टीमा भित्र्याउनुपर्ने र परिचालन गर्नुपर्नेमा श्रेष्ठको जोड थियो ।
‘हाम्रो पार्टीमा सधैं ‘जनयुद्ध’मा सहभागी भएको भनेर थर्काउने गरिन्छ । मार्क्स, एंगेल्सले बन्दुक बोकेका थिए? उनीहरू क्रान्तिकारी होइनन्? बन्दुक नबोक्दैमा क्रान्तिकारी नै नहुने हो ? ’ श्रेष्ठको प्रश्न थियो । उनले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अन्धप्रशंसा गर्ने प्रवृत्ति रहेको भन्दै नेतृत्वको अचाक्ली प्रशंसासँग आफू असहमत रहेको पनि बताए ।
‘अहिले अध्यक्षको प्रशंसा अचाक्ली छ। नेतृत्वलाई नै लाज लाग्ने तहको प्रशंसा ठीक होइन’ श्रेष्ठले भने ‘सही वा बेठीक भन्ने बहस हुन्छ, यो ठीक होइन कमजोरी अध्यक्षबाटै भएको छ।’ याे खबर अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।